Xisaabiye xarun ganacsi oo lagu dilay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXisaabiye xarun ganacsi oo lagu dilay magaalada Boosaaso
November 22, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Boosaaso. [Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Xisaabiye xarun ganacsi oo kutaala Boosaaso ayaa la dilay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah.
Axmed Cali Dalaq kaasoo ahaa xisaabiyaha xarunta ganacsiga Saabir ayaa niman aan la garaneyn oo baastoolado wada ku khaarajiyeen magaalada Boosaaso maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen ilo-wareedku.
Nimanka hubeysan ayaa kadib goobta ka baxsaday, ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray.
Labo qof oo kale oo la socday ninka la dilay ayaa ku dhaawacmay weerarka.
Tirada dilalka ka dhanka ah ganacsatada ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa korortay tan iyo sanadkii 2017.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyada dilka, balse maleeshiyooyinka sida Al-Shabaab iyo Daacish ayaa ka howlgala gobolka.
Labada maleeshiyo ayaa canshuur ku rogay ganacsatada ku sugan magaalada, sida ilo lagu kalsoonaan karo ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Business center accountant shot dead in Bosaso
Talyaaniga oo 6,500 muhaajiriin ah ka badbaadshay badda Mediterranean
Rome-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 6,500 oo qaxooti iyo muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadshay xeebaha Libya shalay oo Isniin ahayd. Ciidamada ilaalada badda Talyaaniga ayaa dadkaas oo la aaminsanyahay in ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo [...]
Ugu yaraan 31 qof oo ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga dalka Iran
Tehran-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 31 qof ayaa ku dhimatay tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga Iran, sida uu sheegay sargaal. Shilka ayaa ka dhacay gelinkii hore [...]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Waxaa galabta magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Shay Mire Dacar. Geerida fanaanka ayaa waxaa laanta Af-Soomaaliga BBC u xaqiijiyay Caabi Mire Dacar oo ahaa fanaanka [...]